🥇 ▷ Android: Google waxaay daahfureysaa barnaamij horey loosoo galiyey oo ah 7.4 milyan oo telefoonada casriga ah ✅
Android: Google waxaay daahfureysaa barnaamij horey loosoo galiyey oo ah 7.4 milyan oo telefoonada casriga ah
Google ayaa ka heshay khayaali horay loo sii qorsheeyay 7.4 milyan oo telefoonada casriga ah ah. Ayaandarro la’aan, basaasinta ayaa inta badan lagu arkaa aaladda heerka gelitaanka. Sida laga soo xigtay Mountain View, fayraska waxa lagu qariyey codsi Android ah oo ay ku rakibeen wax aan caadi ahayn soo-saareyaasha qaar.
Google ayaa ogaatay barnaamij horay loo soo rakibay oo ah 7.4 milyan oo taleefano gacmeed casri ah oo laga soo saaray warshadda, ka warbixi asxaabteena CNet. Qalabka softiweerku wuxuu soo bandhigayaa xayeysiisyo fara badan oo ku saabsan shaashadda guriga moobaylka ah oo aan la garanaynin kuwii wax dhisayay, ayuu yidhi Maddie Stone, oo ah baadhe dhinaca amniga u ah mashruuca Google ee Zero. Fasaxsanaanta ayaa laga yaabaa inay ahayd oo ay dejiyeen soo-saareyaasha saddexaad gudaha overcoat iyada oo aan aqoon aqoon shirkadaha. Shirkadda ma aysan cayimin shirkadaha wax soo saare ka walaacsan.
Sidoo kale aqri: Faylasha Android – telefoonada casriga ah ee casriga ah ayaa la is qaadsiiyaa inta lagu guda jiro kulanka warshadda
Android: Google ayaa ka digaya in horay looga sii darsado kombuyutarka warshad
Maddie Stone ayaa ka digtay haddii “ciladaha khaldan ama amniga ay ka muuqan karaan dalab horay loo rakibay, waxyeelada ayaa ka sii dari karta,” Fariin qarsoon oo ku dhex jirta arjigiisa tooska ah ee kombuyutarka ee soosaaraha kombuyuutar ayaa sidoo kale dhib badan in la arko. Xaaladaha badankood, fayraska ay rakibtay isticmaaleyaashu ama Google runti waa gebi ahaanba awood u lahayn inuu arko khatarta.
Waxaa kasii daran, horay loogu sii faa iiday faa iidooyinka marin habaabinta nidaamka qalliinka iyo macluumaadka aaladdaada, ayuu yiri Maddie Stone. “Haddii aad awoodid inaad dhex gasho silsiladda sahayda bilowga, waxaad u faafinaysaa inta ugu badan ee isticmaaleyaasha sida tirada aaladaha la iibiyay,” ayuu yiri cilmi-baare.
Tani maahan markii ugu horreysay ee Google ay sameyso daahfurka noocan ah. Bishii Juun ee la soo dhaafay, shirkaddu waxay sheegtay inay ka heshay Triada xaasaskiisa dhowr taleefanno gacmeedyo Leagoo iyo Nomu. Mar labaad, softiweerka waxaa kaliya loo go’ay bandhiga xayeysiinta. Arintan ayaa sidoo kale ah xaalada ugu badan ee horay loo sii qorsheeyay, ayay qortay Google. Si looga hortago faafitaanka fayraska horay loo sii qorsheeyay, Google waxay sheeganeysaa inay falanqeyneysay barnaamijka kumbuyuutareedka ee ka badan 1000 soo saare sanadka 2018.